Ulo | Kirin Jewelry
Anyị na-elekwasị anya na-eme ka ọla dị afọ iri na atọ.
Gha ọla ọla ọcha dị iche iche
Kirin ọla Company, raara nye azụmahịa nke 925 ọla ọla, dị ka, 925 Sterling Silver Ọla ntị, 925 magburu onwe ọlaọcha mgbaaka, 925 magburu onwe ọlaọcha bangles., Wdg Kirin si ọla usoro nwere otutu sub-ngwaahịa. Ọla na-elebara iguzosi ike n'ezi ihe na aha azụmahịa anya nke ukwuu. Anyị na-achịkwa àgwà na mmepụta ihe na mmepụta. All ndị a na-ekwe nkwa ọla ntị na-quality-pụrụ ịdabere na na price-mma.
Charm 925 Sterling Silver Ifuru CZ Ruby Earringsmụ Ntanakịrị withmụ nwanyị na-eji Black Gold Plating 300040
Charm 925 Sterling Silver Ifuru CZ Ruby Earringsmụ nwanyị Ntaneti nwere Black Gold Plating 300040 https://www.kirinjew.com
Mkpokọta ọla ntị pụrụ iche nke 925 Sterling na ọla edo plọgị 35802
Ngwongwo ndi puru iche nke 925 Sterling Silver Round na ọlaedo plated 35802 https://www.kirinjew.com
Akwụkwọ Ozi OEM Chains 925 Sterling ọla olu eji ọla edo tinye ya na Riley Plating for Woman 71612
Akwụkwọ Ozi OEM Chains 925 Sterling ọla olu eji eji ọla edo edo edo edo tinyere nwanyị 71612 https://www.kirinjew.com
Mkpesa Mmiri N'ogbe 925 mgbaaka ọla ọcha CZ maka nwanyị nwere Rhodium Plated 102263
Mkpota Mmiri N'ogbe 925 Mkpokọta ọla ọcha CZ maka nwanyị nwere Rhodium Plated 102263 https://www.kirinjew.com
Naanị laser ndị ahịa ụlọ ọrụ aha ma ọ bụ logo na ọla:
E nwere ihe karịrị atụmatụ 50,000 n'ụlọ ngosi anyị, gụnyere mgbaaka, ọla ntị, ihe mkpuchi, olu olu, mgbaaka, mgbaaka, brooches, ọla ọla. Nwere ike ịhọrọ ụdị ị masịrị anyị na ọba egwu anyị, yana mgbe ị debere iwu ahụ, ịnwere ike ịchọ itinye akara ngosi gị ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ gị na ọla.
1) 1.2 nde iberibe ihe kwa afọ ikike
2) 15-45days nnyefe oge
3) Ọnụahịa asọmpi kacha mma
4) Ihe karịrị atụmatụ 50,000 na ebe ngosi
Kirin ọla Company bụ a emeputa, wholesaler na ekspootu emi odude ke Zhuahai, Guangdong Province, China, na banyere 500 ọrụ, 1.2 nde iberibe ihe kwa afọ ikike. Anyị na-emepụta ọlaọcha ọla ọcha / ọla ọla ọcha 925 dị iche iche, gụnyere mgbaaka, ọla ntị, ihe mkpuchi, olu olu, mgbaaka, mgbaaka na brooches nwere nkume dị oke ọnụ, nkume sịntetik na cubic zirconia, ezigbo ọlaọcha, rhodium, ma ọ bụ oji rhodium, bilie gold na-acha odo odo gold plated.
Ihe ịchọ mma anyị na-ekwusi ike na njikwa mma na ọrụ ọ bụla nke ọla. Anyị na-egbochi mmeghe nke nwere ike ime ka ọla anyị ghara ịhọrọ anyị karịa tupu ha erute ndị ahịa anyị.
Kpọtụrụ anyị iji nweta ego
Anyị bụ ezigbo ntụkwasị obi nke ọla bụ nke kwesịrị igosi ndị ahịa gị bara uru.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Anyị na-atụ anya ijere gị ozi n'ọhịa anyị.